Fleksy dia nohavaozina tamin'ny fampidirana fampidirana amin'i Giphy ary fomba iray hanovana lahatsoratra an-tsoratra | Androidsis
Rehefa mitady fomba hafa amin'ny fitendry Android zanatany dia ao amin'ny Play Store no ananantsika safidy maro be hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa rehetra. Na dia manolotra antsika saika asa mitovy aza ny ankamaroany, ny fahasamihafana dia ao amin'ny antsipiriany, antsipiriany izay mety hahatonga ny mpampiasa hisintona fampiharana iray na iray hafa.
Andro vitsy lasa izay ny fitendry Ny Swiftkey an'i Microsoft dia nohavaozina be tamin'ny fanatsarana ny hafainganana izay isokafany isaky ny miantso azy isika aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny telefaona, ho fanampin'ny mampihena ny lagy raha oharina amin'ireo fitendry izay hita ao amin'ny Play Store. Anio no anjaran'ny Fleksy, fitendry izay eo am-pelatanan'ny Pinterest amin'izao fotoana izao.
Tonga tao amin'ny andiany 9.7.6 i Fleksy miaraka amina vaovao roa mahaliana fa efa nohazavainay tamin'ny lohatenin'ilay lahatsoratra. Amin'ny lafiny iray dia ahitantsika ny fampidirana an'i Giphy, sehatra lehibe indrindra manerantany ho an'ny GIF izay manolotra GIF tsy mihetsika fotsiny fa koa sticker hametahana ireo resatsika.
Zava-baovao iray hafa izay avy amin'ny tanan'ity fanavaozana farany ity, hitantsika amin'ny fomba vaovao fanovana hafatra. Mba hanaovana izany dia mila tsindrio fotsiny ny bara habakabaka isika mba hampisehoana ny asan'ny Cursor Control, izay iasantsika afaka mamakivaky ilay lahatsoratra amin'ny fomba tena tsotra isika ary haingana nefa tsy mila manindry sy misintona ny rantsan-tànanao eo amin'ny efijery.
Fleksy dia azo sintonina maimaim-poana tanteraka amin'ny alàlan'ny rohy avelako amin'ny faran'ity lahatsoratra ity. Saingy, raha te hampifanaraka ny fomba fijerin'ny klavintsika isika, na dia tsy mitovy aza ny fiaviantsika, dia voatery mandeha any amin'ny toeram-pisavana izahay hankafy ireo lohahevitra loko atolotray antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fleksy dia nohavaozina miaraka amin'ny fampidirana an'i Giphy ary fomba iray hanovana ny lahatsoratra voasoratra